I-La Cabane de Lili Prune - I-Airbnb
I-La Cabane de Lili Prune
Goudargues, Occitanie, i-France
Indlu encane ibungazwe ngu-Mickael
U-Mickael Ungumbungazi ovelele
Itholakala phakathi kwe-Orange, i-Alès ne-Uzès, igebe lika-Lilian Prune e-Goudargues, izokubeka enkabeni ye-Gard nesifunda sayo.
Edolobhaneni elinosayizi wabantu, eliphambene ne-Cèze, elinikeza ubuhle bayo obungatheni, uzothola wonke amasevisi (amabhikawozi, inyama, isitolo esikhulu...) adingekayo ekuhlaleni kwakho futhi ungajabulela imakethe yayo ngoLwesithathu ekuseni.
Indlwana kaLilian Prune, etholakala emizuzwini engu-5 ukusuka enkabeni yedolobha, ikubeka endaweni yakho yokuhlala entsha, zonke izici zokunethezeka kokuqala (izinto zokulala zekhwalithi, ikhishi elinakho konke, i-inthanethi etholakalayo, ishawa enesibhakabhaka esinemvula, i-air conditioning...) yezivakashi ezimbili futhi uzoba nayo yonke indawo yokuhlala enendawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela kanye nendawo yokupaka yamahhala nevikelekile esayithini.
Ukufika okuzimele kungenzeka ukuze kube nokushintshashintsha nezimo okuthe xaxa.
Le ndawo ayizifanele izilwane ezifuywayo noma izingane (umbhede owodwa kuphela omdala otholakalayo) kodwa izokuvumela ukuthi uzithole usebhodini ukuze ujabulele ukuhlala okunokuthula kwezithandani emgwaqeni othulile. Ungabuye ujabulele ukuhamba ngezinyawo eduzane, (i-Concluses de Lussan) noma usuka edolobhaneni, ukuze uthole okungcono kakhulu kuwe.
Uma unemibuzo eyengeziwe, sicela uthintane no-Mick, umbungazi wakho wesikhathi esizayo!
UMickael Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Goudargues namaphethelo